Online Khabar Patrika || प्रविधि
रमेश लम्साल, काठमाडौँ । तपाईंको कार्यालय वा निवासमा कुनै कारणवश विद्युत् कटौती भयो भन्ने कुराको जानकारी लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गर्ने सूचनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त सूचना सञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित भएपछि मात्रै थाहा हुन्थ्यो । पछिल्लो दिनमा प्राधिकरणले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धिलाई प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई सहजै सूचना दिने उद्देश्यले नयाँ खालको मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार...
एजेन्सी । विश्वमा मोबाइल फोनको प्रयोग भएदेखि यता अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोबाइल फोन कुन होला ? सामसुङ र एप्पलका पछिल्ला मोडेलका चर्चित स्मार्टफोन दुनियामा सबैभन्दा धेरै बिकेका मोबाइल फोन हुन् भन्ने तपाईंले सोच्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री भएका स्मार्टफोनको सूचीमा टप टेनसम्म सामसुङको ग्यालेक्सी एस वा नोट सिरिज र नयाँ आइफोनका मोडेल कुनै पर्दैनन् । आखिर विश्वमा अहिलेसम्म धेरै बिक्री भएका...
एजेन्सी । कुनै पनि कुरा थाहा पाउनको लागि हामी अहिलेको समयमा सबै भन्‍दा पहिले गुगलमा खोज्न थाल्छौ । के तपाईलाई थाहा छ सन् २०१८ मा सबैभन्दा ज्यादा कुन शब्द गूगलमा खोजियो ? गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो शेयर गरेर २०१८ मा विश्वभरका मानिसहरुले सबैभन्दा ज्यादा सर्च गरेको वर्डको बारेमा बताएका छन् । #YearInSearch2018 नामबाट २ मिनेट लामो भिडियोमा विश्वभरका मानिसहरुले २०१८ मा ‘गुड’ (राम्रो) चीजको बारेमा खोजी...
एजेन्सी । मानिसको मृत्यु भइसकेपछि उसको अंगलाई जीवित मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नु निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, विश्वमै पहिलो पटक मृत महिलाको गर्भाशय जीवित महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको छ । यति मात्र होइन, गर्भाशय प्रत्यारोपण गरिएकी महिलाले एक स्वस्थ बच्चीलाई जन्म पनि दिएकी छन् । ब्राजिलको साओपाओलो शहरमा २०१६ मा मृत महिलाको शरीरबाट गर्भाशय निकालेर अर्को महिलामा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । १० घन्टासम्म चलेको प्रत्यारोपणपछि महिलाको फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गरियो । यसअघि...